Iingcebiso malunga nokuqala ngokukhawuleza nangokucocekileyo kwiWindows | Iindaba zeGajethi
Ngaba unazo iingxaki zokuqalisa okanye zokuqalisa kwiWindows? Olu hlobo lweemeko lunokwenzeka kubantu abaninzi, olungabandakanyi kuphela ukucotha okwenziwa yinkqubo yokusebenza, kodwa kunye neempazamo ezimbalwa ezinokuvela ngaphandle kwesizathu, kunye nomzuzu olindelekileyo.
Umzekelo, oqhelekileyo «isikrini esiblowu»Ngaba lolunye lweempawu ezicaphukisayo uninzi lwabasebenzisi beWindows ekufuneka bajongane nazo, kwaye kufuneka bazame ukulungisa le ngxaki ngokungena kwi«imowudi yokungaphumeleli«. Ukuba uza kwenza ezi ntlobo zemisebenzi ngexesha elithile, uyakube uyiqondile loo nto inkqubo yokusebenza iqale ngokukhawuleza kunesiqhelo. Ngokusisiseko leyo yingcinga esiza kuyamkela okwangoku, oko kukuthi, siya kuzama ukusebenzisa lo mgaqo ukuze inkqubo yethu yokusebenza iqale ngesantya esikhawulezayo kunesiqhelo.
1 Ngaba singaqala iWindows "kwimodi ekhuselekileyo"?
2 Khubaza iinkonzo ze-logon kwiWindows
3 Khubaza usetyenziso olunokusetyenziswa okuncinci kwiWindows
4 Khubaza amanqaku okucwangciswa okucwangcisiweyo kwiWindows
Ngaba singaqala iWindows "kwimodi ekhuselekileyo"?
Ewe kunjalo, ukuba nje inkqubo yethu yokusebenza ibonakalisa uhlobo oluthile lweengxaki okanye ukuphazamiseka; Ngelishwa, le "ndlela yokungaphumeleli" iza khubaza amanqaku abalulekileyo enkqubo yokusebenza, ezinokuthi zithintele usetyenziso kunye nezixhobo ezimbalwa esisebenza nazo mihla le ekusebenzeni. Ke ngoko, asinakukwazi ukusebenza ngokuchanekileyo kule ndlela kodwa, ukuba sinokwamkela umgaqo-siseko xa iiWindows ziqala ngendlela eqhelekileyo ukuba samkela amaqhinga ambalwa.
Khubaza iinkonzo ze-logon kwiWindows
Kwizihlandlo ezininzi sikhankanye ezi ntlobo zemisebenzi kunye nezinye iindlela khawulezisa ukuqala kweWindows, nangona ngoku siza kubonisa amaqhinga ambalwa ongezelelweyo onokuthi uwasebenzise ukuze uqalise inkqubo yokusebenza ifane kakhulu nento onokuyifumana, nge «imo ekhuselekileyo». Kwimeko yokuqala, kuya kufuneka fowuna "msconfig" ngendlela eqhelekileyo (ukuxhomekeka kwi-Win + R indlela emfutshane).
Nje ukuba unefestile yesi sixhobo kufuneka uye kwi "iinkonzo" isithuba; Emva kwexesha kuya kufuneka uyenze ibhokisi ezantsi ngasekhohlo ukuya fihla iinkonzo zikaMicrosoft, kuba ngale nto ngekhe ususe imisebenzi embalwa ebalulekileyo kwinkqubo yokusebenza. Okokugqibela, kufuneka ucofe iqhosha elithi "Yenza kungasebenzi konke" ngasezantsi ngasekunene kwaye uqalise ikhompyuter yakho.
Khubaza usetyenziso olunokusetyenziswa okuncinci kwiWindows
Kule festile inye sikulo mzuzu, ungasebenzisa umsebenzi owongezelelweyo; Oku kuyaphunyezwa ukuba uya kwi-tab elandelayo, oko kukuthi, leyo inegama "Windows Start".
Xa sele ulapho, kufuneka uqale ukhangele lonke uluhlu lwezo zicelo ocinga ukuba "azisetyenziswanga"; Kule meko, awunakuzikhubaza zonke kuba apha, akukho bhokisi igcina ezo zibaluleke kakhulu zibaleka njengoko besitshilo kwincam yangaphambili. Kuya kufuneka ukhethe nayiphi na kwezi izicelo kwibhokisi nganye nganye ukwenzela ukuba ukwenziwa kwayo kuphele kwaye kamva, cofa kwindawo ethi "Faka isicelo".
Khubaza amanqaku okucwangciswa okucwangcisiweyo kwiWindows
Olu khetho lunokwenziwa ngabo bazithatha njengabasebenzisi abakhethekileyo beWindows; Kungenxa yokuba kuya kufuneka sazi ukuba yintoni imisebenzi okanye iinkonzo ezisebenza ngeWindows ngokocwangcisiweyo, Into esingenakuze siyazi ngokuchanekileyo, nangona sinokuthi sihanjiswe ngumbono othile.
Njengangaphambili, apha kufuneka sibize umsebenzi ogama lingu «Ulawulo lweeshedyuli«, Ekuya kufuneka siyibhale emva kokusebenzisa indlela emfutshane« Ukuphumelela + R »; Ngale nto, iwindow iya kubonakala ngokuzenzekelayo apho yonke imisebenzi eyenziwa yiWindows ngokocwangcisiweyo ikho. Kuya kufuneka sikhethe nayiphi na kubo ngeqhosha lasekunene le mouse kwaye siyicime ngenketho yemenyu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Amaqhinga: Uyenza njani into yokuba ucoce kwaye ukhawuleze ukuqala kweWindows
Izixhobo ezi-3 ezikwi-Intanethi ukuguqula inqaku kwiwebhu libe luxwebhu lwePDF